Windtalkers (2002) | MM Movie Store
Director: John Woo ရိုကျကူးတငျဆကျထားပွီးJune 14, 2002 မှာ ရုံတငျပွသခဲ့တဲ့ စဈကားဖွဈပါတယျ…”
စဈကား ကောငျးကောငျးလေးတှေ ဘာသာပွနျ ကွညျ့ခငျြရငျ သူ့ကိုသာ ပူဆာဗြို့ ”၁၉၄၁ ဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျမှာ အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ နာဗားဂြိုး လူမြိုးမြားဟာ သူတို့ရဲ့မိခငျဘာသာစကားနှငျ့အတူ ဆိုကျဖာဆကျသှယျရေးသမားမြားအဖွဈ လကေ့ငျြ့ခွငျးခံခဲ့ရပါတယျ.
ဆျောလမှနျကြှနျတိုကျပှဲအတှငျး အမိနျ့ကို ဦးထိပျထားခဲ့တဲ့အတှကျကွောငျ့ မိမိရဲ့ လကျအောကျငယျသားအားလုံးဆုံးရှုံခဲ့ရကာ မိမိကိုယျမိမိ အပွဈမကငျးသလိုခံစားနရေတာကတော့တပျကွပျကွီး ဂြိုးအနျဒါ (Necolas Cage) ပဲဖွဈပါတယျ တပျကွပျကွီး ဂြိုးအနျဒါ ကို ဆိုကျဘာသမား ဘနျယာဇီ (Adam Beach) လုံခွုံရေးအတှကျ တာဝနျပေးအပျလာတဲ့အခါ
ခံစားခကျြကို ရှတေ့နျးမထားပဲ ဘယျလိုထမျးဆောငျခဲ့တယျ ဘယျလိုတိုကျပှဲဝငျခဲ့တယျဆိုတာ မကျြဝါးထငျထငျဒီကားမှာ တှမွေ့ငျရမှာပဲဖွဈပါတယျ. IMDb 6.0 ရရှိထားတဲ့ အကျရှငျစဈကားကောငျး တဈကားပဲဖွဈပါတယျ
Director: John Woo ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီးJune 14, 2002 မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ စစ်ကားဖြစ်ပါတယ်…”
စစ်ကား ကောင်းကောင်းလေးတွေ ဘာသာပြန် ကြည့်ချင်ရင် သူ့ကိုသာ ပူဆာဗျို့ ”၁၉၄၁ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ နာဗားဂျိုး လူမျိုးများဟာ သူတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ ဆိုက်ဖာဆက်သွယ်ရေးသမားများအဖြစ် လေ့ကျင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်.
ဆော်လမွန်ကျွန်တိုက်ပွဲအတွင်း အမိန့်ကို ဦးထိပ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် မိမိရဲ့ လက်အောက်ငယ်သားအားလုံးဆုံးရှုံခဲ့ရကာ မိမိကိုယ်မိမိ အပြစ်မကင်းသလိုခံစားနေရတာကတော့တပ်ကြပ်ကြီး ဂျိုးအန်ဒါ (Necolas Cage) ပဲဖြစ်ပါတယ် တပ်ကြပ်ကြီး ဂျိုးအန်ဒါ ကို ဆိုက်ဘာသမား ဘန်ယာဇီ (Adam Beach) လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ပေးအပ်လာတဲ့အခါ
ခံစားချက်ကို ရှေ့တန်းမထားပဲ ဘယ်လိုထမ်းဆောင်ခဲ့တယ် ဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မျက်ဝါးထင်ထင်ဒီကားမှာ တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်. IMDb 6.0 ရရှိထားတဲ့ အက်ရှင်စစ်ကားကောင်း တစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်